स्वर्गझैँ रहस्यमयी ‘कैलाश पर्वत’ :भगवान शिवको वासस्थान मानिन्छ ! – Rastriyapatrika
स्वर्गझैँ रहस्यमयी ‘कैलाश पर्वत’ :भगवान शिवको वासस्थान मानिन्छ !
कैलाश पर्वत विश्वभरिका हिन्दु -बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको श्रद्धा र आस्था सँग जोडिएको छ । पर्यटकीय हिसाबले आकर्षक गन्तव्य भए पनि कैलाश पर्वतको छुट्टै धार्मिक महत्व छ ।
पौराणिक कथन अनुसार शिवका अलवा ब्रह्मा, आदि देवगण मरिचि आदि ऋषि, रावण, भष्मासुर आदिले यहाँ तपस्या गरेका थिए । यस प्रदेशमा व्यास, भीम, कृष्ण, दत्तात्रेय आदिले यात्रा गरेका थिए । आदि शंकराचार्यले यही स्थानमा प्राण त्याग गरेको भनाई पनि पाइन्छ ।
मेरु, सुमेरु, सुसुम्ना, हेमाद्री, देवागण आदि पर्वतहरुले सुसुजित यस पवित्र स्थल मात्र नभएर प्राकृतिक छटाको भण्डार पनि हो । यस पवित्रस्थल हिन्दूहरूको मात्र नभएर वौद्ध, जैन, सिख, आदि धर्मावलम्वीहरुको पनि तपोभूमि हो ।
पवित्र धार्मिक स्थलमा हजारौं धार्मिक पर्यटकहरु पुग्ने गर्छन् । यो ठाउँ धार्मिक महत्व बोकेको मात्रै होइन, अत्यन्त मनमोहक र सुन्दर पनि छ ।
कैलाश पर्वतको टुप्पोमा आजसम्म कोही पनि पुग्न सकेको छैन । कैलाश पर्वतलाई विश्वको सबैभन्दा रहस्यमयी पर्वत पनि मानिन्छ । कैलाश पर्वतमा शिव भगवान आज पनि आफ्ना परिवारसँग विराजमान छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
दुँनियाको सबैभन्दा पवित्र पर्वत मानिने यस पर्वतसँग जोडिएका केही कुराहरु अद्भुत छन् । यी मध्ये केही सुन्दै आइरहेको र केही नसुनिएको कुराहरु छन् । केही अचम्मका कुराहरु आँखाले देखिएका छन् भने केही रहस्यका कुराहरु वैज्ञानिकले समेत पुष्टि गरेका छन् ।
कैलाश पर्वतको उचाई विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत ‘सगरमाथा’ भन्दा लगभग दुई हजार २ सय मिटर कम रहेको छ ।
समुन्द्र सतहदेखि बाइस हजार ६८ फिट उचाईमा रहेको छ । यो पर्वत चीनको तिब्बतमा रहेको छ यसलाई आकाश र धर्तीको सम्बन्धको विन्दु पनि मानिन्छ ।
कैलाश पर्वतको महत्व यसको उचाईसँग भन्दा पनि यसको बिशेष आकारसँग रहेको छ । यसको चौमुखे आकार दिशा बताउने कम्पासको चार बिन्दू झैँ मानिन्छ ।
कैलाश पर्वतबाट चार महान् नदीहरु उत्पन्न भएका छन् । ती नदीहरु हुन् – सतलुज, सिन्धु, ब्रम्हपुत्र र घाघरा । कैलाश पर्वतलाई धर्तीको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । यहाँ दिशा सुचक (कम्पास) ले पनि सही तरिकाले काम गर्दैन ।
विश्वको अन्य ठाउँहरुभन्दा कैलाश पर्वतमा समय सबैभन्दा छिटो बित्छ । यसको कारण अहिसेसम्म वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
कैलाश पर्वतमा रहेको मानसरोवर ताल जुन विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको शुद्ध पानीको सबैभन्दा ठूलो ताल समेत हो । यो ३२० बर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
कैलाश पर्वतमा अर्को राक्षस ताल पनि रहेको छ । सतलुज नदी राक्षसतालबाट शुरु भएको छ । पवित्र मानसरोवर नजिकै रहेर पनि यो ताल हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको लागी पूजनीय र पवित्र मानिदैन । रावणले यही तालको किनारमा भगवान शिवको कठोर तपस्या गरेर बरदान पाएका थिए र यो ताललाई रावण ताल पनि भनिन्छ ।
पुराणमा मानसरोवर ताललाई नै ‘चीर सागर’ भनिएको हो । मानसरोवर ताल कैलाश पर्वतभन्दा चालीस किलोमिटर टाढा छ । यो ताल शेषनाग र भगवान बिष्णुको बासस्थान हो भन्ने धार्मिक मान्यता छ । यस ठाउँमा प्रकाश तरंग र ध्वनी तरंगको अद्भुत समागम हुन्छ, जसबाट ॐ ध्वनी प्रकट हुन्छ ।
गर्मी महिनामा जब मानसरोवरको हिउँ पग्लेर बग्न थाल्छ तब डमरु बजेको आवाज सुनिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वाश छ ।
मानसरोवर तालमा डुबेर कसैको मृत्यु भएमा त्यो मानिस सीधैं रुद्र लोकमा प्रस्थान गर्ने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ ।
मानसरोवर तालमा स्नान गर्ने सबैभन्दा उपयूक्त समय बिहान ३ बजेदेखि पाँच बजेसम्मको हो । यो समयमा देवताहरु पनि यहाँ स्नान गर्न आउछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । कैलाश पर्वत आफ्नो स्थिति बदलिरहन्छ । कैलाशको उच्च भागको आकृति विराट शिवलिंगको जस्तै छ । जहाँ बर्षैभरी हिउले ढाकिएको हुन्छ ।
थुप्रै कोसिश गर्दा पनि यसको शिखरमा अहिलेसम्म कोही पनि पर्वतारोही पुग्न सकेका छैनन् । ११ औं शताव्दीमा एक तिव्वती बौद्ध योगीले कैलाश पर्वतको शिखरमा पुगेको विश्वास गरिन्छ । तर यो अपवादको रुपमा रहेको छ ।
२० औं शताव्दीमा पश्चिमा देशका अनैकौ पर्वतारोहिहरु कैलाश पर्वतमा चढ्ने कोसिश गरेका थिए तर कोही पनि सफल हुन सकेनन् ।
कैलाश पर्वत चढ्ने कोसिश गरेका पर्वतारोहिहरुको फरक – फरक अनुभव रहेको छ । कसैले पर्वतारोहण गर्न लाग्दा बेगले आधी आएको त कसैको मुटु दुखेको र केहीले सही बाटो जाँदाजादै बाटो भुलेको र केहीले बाटै गायब भएको बताए ।
कैलाश पर्वतको बारेमा नसुल्झिएको रहस्य देखेर चीन सरकारले सन् २००१ मा कैलाश पर्वत चढ्न पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।